2019 budget statement: the nation awaits – NewsDay Zimbabwe
Previous article Fifa flexes muscle
Next article Gospel musicians pull out of fiesta
Shouting capitalistic economic ethics is one entity and adhering to them is another entity!!!
Comment…Dzakateya, ZVIUYA ZVIRIMBERI. Kugona basa kweanogona hunge paita shanduko yekuti mipururu nemheterwa zvinoita ruzha mumatunhu
ose enyika. Ngapavewo neshanduko, kwete makore ose zvawo “SUNGAYI MABHANDE”. Ko achasunungurwawo rinhi mabhande acho. Imi enyu murikusungawo here? Kana kuti ruzhinji
ngorwosunga imi mosunungura kuitira kufutunuka kweyenyu madumbu.